09 Febroary 2016
Tapatapakahitra niarahan'ny Pôetawebs tamin'i Mahery Andriamahandrimanana
Miarahaba ny vahiny ny tranonkala Pôetawebs. Amin'izao fotoana mialoha ny fetin'ny mpifankatia izao dia maro ireo hetsika an-kira sy an-tononkalo ato ho ato. Anisany ny "HANITRY NY FITIA". Raha mbola tsy henonao dia ny DTM no hisehatra azy. Izany indrindra no nahatonga an'i Mahery Andriamahandrimanana mivahiny ato amin'ny Poetawebs.
Aleo ilazalaza ny momba azy angamba aloha izy.
Faly miarahaba ny mpikarakara sy ny mpisera rehetra eto amin'ny Pôetawebs. Mahery na i RAFARALAHY Tojohery Tahina Andrivola no ahafantarana ahy. Mpikambana ao amin'ny MPIZAKA Stelarim, Dian-tanamasoandro (DTM), FANTARO ary Anjozorobe sy ny literatiora Malagasy(A.L.MA).
Matoa ianao Mahery tonga eto aminay dia angamba nitondra vaovao ho anay tia ny kanto, inona ary izy io ?
Marina tokoa izany tonga eto aho hampahafantatra antsika ny hetsika "HANITRY NY FITIA" izay hatao ao amin'ny IKM Antsahavola ny 13 febroary 2016 ho avy izao, manomboka amin'ny 02 ora tolakandro.
Hetsika tontosain'ny namana sy Mpikambana Dian-tanamasoandro (DTM) rehetra izy io.
''Hanitry ny Fitia"
Fikambanana Dian-Tanamasoandro hoy ianao teo. Azonao hazavaina ?
Ny fikambanana Dian-tanamasoandro dia vondron'ny mpitia sy mpandala fahendrena, mpikanto izay manana ny teny fanevany hoe: "Tsy ny lalana no natao fahendrena fa ny fahendrena narafitra ho lalana." Fikambanana tarihin'i Brentch Mbolamasoandro.
Efa dimy taona izay no nijoroan'ny fikambanana ary am-pisantarana ny fahadimy taonany indrindra izy amin'izao hetsika "HANITRY NY FITIA"izao.
Azonao asiana resaka kely ve ny momba ny mpikambana ao aminy sy ny raharaha sahanin'ny fikambanana?
Araka ny efa nolazaina teo dia dimy taona izay no nijoroan'ny fikambanana. Nandritra izay dimy taona izay dia maro ireo tonga nanatevin- daharana ny fikambanana satria ny fikambanana dia misokatra ho an'ny sokajin-taona sy ho an'ny sokajin'olona rehetra.
Ankoatra ity hetsika an-tononkalo ity dia mivelatra amin'ny sehatry ny kanto rehetra ihany koa ny fikambanana toy ny tantara an-tsehatra, hira, dihy sns...
Hanitra fitia ny anaran'ny hetsika, nahoana no natao 13 febroary ny hetsika ?
Nokendrena mihitsy hifanandrify amin'ny andron'ny mpifankatia ny hetsika mba hitondra hanitra sy hampamerovero ny fitiavana ary izany indrindra no nampisalorana azy ny anarany hoe "HANITRY NY FITIA".
Dia ho manimanitra fitia tokoa izany isika. Antsanareo mpikambana ihany ve no ho heno amin'izany ?
Amin'ny ankapobeny aloha dia ny mpikambana no tena mandray anjara betsaka amin'ny hetsika saingy amin'ny maha fetin'ny mpifankatia azy dia tsy maintsy hisy ihany ampaham-potoana hatokana ho an'ireo tia handray anjara.
Hisy fahatsiarovana hifampizarana amin'izay hanatrika ve ?
Toy ny mahazatra dia fanaon'ny fikambanana ny mifampizara ny kanto sy mifampizara mari-pahatsiarovana ka ataoko fa tsy ho diso anjara isika amin'io andro io. Eny isika mahita azy fa tongava!
Fanontaniana kidaladala, tsy maintsy mpifankatia ve izany vao afaka hanatrika ao?
Tsy voatery ho mpifankatia... Misokatra ho an'ny rehetra ny hetsika satria isika rehetra dia samy manampitiavana, nateraka hitia ary samy afaka mihanoka ny "HANITRY NY FITIA" avokoa.
Na dia izahay zokinjokiny koa aza ve?
Eny, mahazo tokoa satria ny "HANITRY NY FITIAVANA" dia toy ny garana ka antitra vao mamerovero, antitra ihany koa vao tsara tsiro e!
Araraotina ny fandalovanao eto Mahery, ahoana ny fomba fahitanao ny literatiora malagasy ankehitriny ? Inona no antony sy ny vahaolana atolotrao ?
Miroborobo fatratra ny literatiora sy ny asa soratra Malagasy. Mila fitandremana anefa manoloana ny fandrosoan'ny teknolojia sy fangalana tahaka ny teny vahiny. Samy tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny fitsipika sy fanajana tsipelina malagasy ny rehetra. Tafahoatra sy mihoapapana mantsy ny fanoratana sy fampitana hafatra an-tsary ka manadino ny abidia isika indraindray. Entanina isika hamaky boky sy hijery ireo tahirin-kevitra ary hikaroka ireo teny Malagasy fampiasa.
Marina izany fa antsika rehetra ny andraikitra ka ho famaranana, manana hafatra apetraka aminay ve ianao?
Misaotra sy mankasitraka ny mpikarakara. Fitaovam-pifandraisana voalohany ny teny koa tokony ho saro-piaro isika rehetra. Mbola malalaka ny sehatry ny kanto, indrindra ny tononkalo. Koamanentana antsika handroso hatrany satria velona sy miaina mandrakizay ny teny. Veloma vetivety.
Date de dernière mise à jour : 09/02/2016